Pabrikan'ny tariby vy, mpamatsy - Mpanamboatra tariby China
RAZOR WIRRE BARBED
RAzora tariby tariby, azonao atao koa ny miantso azy io ho tariby concertina, dia bolongam-by vita amin'ny vy misy sisiny maranitra izay tanjona mba hisorohana ny fandalovan'ny olombelona. Ny teny hoe "hareza hareza", amin'ny alàlan'ny fampiasana lava, matetika dia nampiasaina hamaritana ireo vokatra vita amin'ny tadin'ny barbed. Razor tariby dia maranitra kokoa noho ny mahazatra tariby barbed; izy io dia voatonona araka ny fisehoany fa tsy maranitra. Ny teboka dia maranitra tokoa ary natao hamiravira sy handrovitra akanjo sy nofo.
Tariby nandrisika, azonao atao koa ny miantso azy hoe tariby vy nandrisika, dia tariby marobe izay nandalo ny fizotry ny simika amin'ny galvanisation. Ny galvanisation dia miteraka takelaka vy tsy misy fangarony miaraka amina vy miaro, harafesina, toy ny zinc. Ny tariby nandrisika dia mahery, mahazaka harafesina ary misy tanjona marobe. Izy io koa dia tonga amin'ny refy isan-karazany.
Ny tariby vy nandrisika dia mamatotra tena sy malefaka ary malefaka mora ampiasaina. Ny tariby dia azo ampiasaina amin'ny tetik'asa isan-karazany, ao anatin'izany ny zavakanto sy ny asa tanana ary na ny fanamboarana fefy aza. Ny tanana dia mijanona ho madio ary tapahina maimaim-poana. Mahatohitra Kink.
Ny tariby misy barbed, fantatra ihany koa amin'ny tariby barb, dia karazana tariby vy fanaovana fefy vy namboarina miaraka amin'ny sisiny maranitra na teboka voalamina mifanelanelana amin'ireo tadiny. Izy io dia ampiasaina hananganana fefy tsy dia lafo ary ampiasaina eo ambonin'ny rindrina manodidina ny fananana azo antoka. Izy io koa dia singa iray lehibe amin'ny fiarovana amin'ny ady amin'ny hady (ho vato misakana).
Ny olona na biby manandrana mamaky na mivoaka amin'ny tariby misy barbed dia hiharan'ny tsy fahazoana aina ary mety maratra (marina indrindra izany raha elektrika ihany koa ilay fefy). Ny fefy tariby madiodio dia tsy mila afa-tsy fefy fefy na tariby ary fanamboarana fitaovana toy ny foto-tsakafo. Tsotra ny fananganana sy ny fananganana haingana, na dia olona tsy mahay aza.